Ilahle amanye amaphuzu iSundowns ibanjelwa yiCeltic ekhaya - Impempe
Ilahle amanye amaphuzu iSundowns ibanjelwa yiCeltic ekhaya
Bloemfontein Cletic (0) 0
Iphinde yalahla amaphuzu iMamelodi Sundowns ibanjelwa ekhaya yiBloemfontein Celtic emdlalweni weDStv Premiership, eLoftus Stadium, ePitoli, ngoLwesibili.
Bese kungokwesibili kulandelana amaBrazilians edlala ngokulingana, ehluleka nawukushaya igoli. Ngempelasonto leli qembu laseChloorkop libambane neSuperSport United ngo 0-0 emdlalweni wabakhaya baseTshwane.
Nokho umdlalo wayizolo bekungafanele uphele ngo 0-0. ISundowns ilishayile igoli wathi unompempe bese kune off-side, kanti neCeltic ilishayile elayo kwathiwa bese kuyi off-side. Womabili la magoli abengeyona i-off side, futhi kucacile ukuthi unompempe obedlalisa, uKamohelo Ramutsindela, nabasizi bakhe, abathathanga izinqumo okuyizona.
Ngaphandle kwalokho iSundowns ithole inqwaba yamathuba okushaya amagoli kodwa yangawasebenzisa ngendlela. Umdlali othole amathuba amaningi kube nguKermit Erasmus, ohluleke ukuthola igoli kuJackson Mabokgwane weCeltic, ngesiwombe sokuqala.
UMabokgwane kuphoqeleke ukuthi aphume ngesiwombe sesibili, ngenxa yokulimala, indawo yakhe yathathwa uSipho Chaine. U-Erasmus uphinde wathola amathuba amabili sekungene lo nozinto kodwa kwangavuma ukuthi ibhola liqabule inethi. Elinye lawo lishaye ipali.
Ukugeja kweSundowns kucishe kwayifaka enkingeni ngomzuzu ka-79, ngesikhathi u-Andile Fikizolo weCeltic ethola uqekelele wethuba. Nokho lo mdlali uvele walibhamuza phezu kwamapali ibhola.
Ngomzuzu ka-82 u-Erasmus, obesehluleke wancama ukushaya igoli, ukhishiwe kwangena uKeletso Makgalwa. Nokho iSundowns igcine ingakwazanga ukuthola igoli lokuwina.
Ukudlala ngokulingana kweDowns kuchaza ukuthi isilahle amaphuzu amane emidlalweni emibili. Emdlalweni olandelayo izobhekana neSwallows FC, eLucas Moripe Stadium, ngoMgqibelo ngo-3 ntambama.
Previous Previous post: Umdlali weLeopards uzothiphisa umqeqeshi ngeCape Town City
Next Next post: Iqhubekile nokushoshela iChiefs ibhaxabula kanzima iTshakhuma